စက်မှုလုပ်ငန်းများကခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများ၏အသုံးဝင်မှု | OMG Solutions
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဥပဒေအကောင်အထည်ဖော်မှုအလေ့အကျင့်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အရာရှိတစ် ဦး ၏မျက်မှန်သို့မဟုတ်ရင်ဘတ်ပိုင်နက်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်စောင့်ကြည့်နေသည့်အရာရှိများသို့မဟုတ်ကွန်ယက်မှတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သောတာ ၀ န်အမျိုးမျိုးမှအသုံးပြုသောအခါစဉ်ဆက်မပြတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာဝတ်ဆင်ထားသောဗွီဒီယို (BWV)၊ အခြားအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကင်မရာများသို့မဟုတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောကင်မရာများသည်ဝတ်ဆင်နိုင်သောအသံ၊ ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းဆိုင်ရာမူဘောင်ဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးများကအသုံးပြုသော်လည်းခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ရသောကင်မရာများသည်များစွာသောအသုံးပြုမှုများရှိပြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်, ဥပမာ:
လျှပ်စစ်၊ ဂတ်စ်နှင့်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှု
သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာများ၏ပမာဏကိုရဲနှင့်လုံခြုံရေးအစောင့်များအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမမှန်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်သုံးကင်မရာများကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်၊ ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီးသူတို့တွေရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ ဒီနည်းပညာကိုဒီစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်အတွက်ကျောရိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သလား?
ခန္ဓာကိုယ်သုံးကင်မရာများ - နည်းပညာမြင့်တက်လာခြင်း -
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကိုအထောက်အကူပေးရုံသာမက၎င်းသည်အခြားအသုံးဝင်မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်း၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည့်အနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်လာမည့်နည်းပညာမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပညာအသစ်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံရန်အတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသော Cams ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ နည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးရန်အမြဲခက်ခဲသည်။ ယူနိုက်တက်ရှိစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးသည် 2017 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် TomTom Telematics 'အကြီးတန်းမန်နေဂျာလေ့လာမှုအရသူတို့၏နည်းပညာများသည်နည်းပညာအသစ်များချမှတ်ရာတွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသည် ကွေးနနျးစကျ.
အောင်မြင်သောဘဝကိုရရှိရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အတွေးအမြင်အသစ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောထားသည်လှေခါးထစ်ကိုအမြဲတက်နေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည်လည်းအလားတူပင်။ နည်းပညာအသစ်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အတိတ်ကာလတွင်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အမြင်အရစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းနှင့်စီးပွားရေးသမားတိုင်းသည်သူတို့၏သက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအသစ်တွင်နည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများသည်နည်းပညာမြင့်တက်လာပြီးခေတ်သစ်နှင့်ဂန္ထဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း -
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်လူတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည့်ဘဝကဏ္ field တိုင်း၌အသုံးပြုနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလည်းသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသည်စီးပွားရေး၏ဘဝတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးမူဘောင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ Agribusiness သည်အာဟာရနှင့်ရေနံစိမ်းအပြင်လူ ဦး ရေအလွန်များပြားသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။
အခုမေးစရာကကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ထားတဲ့ကင်မရာတွေဟာငါတို့လယ်သမားတွေကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။ လယ်သမားအများအပြားသည်လယ်ယာလုပ်နေစဉ်ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရခြင်းများကိုတွေ့ရသည်။ ဤဒဏ်ရာများသည် Corps မှဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကူးစက်ခြင်း၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးအချို့သောတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ 2014 ရှိရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12,000 လူငယ်များသည်လယ်ယာမြေများတွင်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်; ဤဒဏ်ရာများ၏ 4,000 သည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုတော့အဲဒီအချိန်ကသင့်လျော်တဲ့နည်းပညာကိုသုံးရင်တောင်ငယ်ရွယ်တဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ဒီဒဏ်ရာဒါမှမဟုတ်သေဆုံးမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါပြီ။ လယ်သမားများ၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ကိုယ်ခန္ဓာမှ ၀ တ်ထားသောကင်မရာကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းကသူတို့ကိုချစ်သောသူများအိမ်တွင်စောင့်ကြည့်နေခြင်းကိုလုံခြုံမှုရှိစေလိမ့်မည်။ မသေချာမရေရာသောသို့မဟုတ်ကံဆိုးသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ပါက၎င်းတို့အားအချိန်မီကယ်ဆယ်ရန်လာနိုင်သည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်ဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
အချို့သောကောက်ပဲသီးနှံများကိုညအချိန်တွင်ရေလောင်းရန်လိုအပ်သည်၊ လယ်သမားများသည်ညအချိန်တွင်တစ် ဦး တည်းသီးနှံများသို့ထွက်ခွာသွားရန်လုံခြုံမှုမရှိဟုခံစားရသည်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့သိရင်စောင့်ကြည့်ခံနေရပြီးမတော်တဆဖြစ်ရပ်တွေအားလုံးကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားမယ်။ ညမှာတစ်ယောက်တည်းသွားဖို့တွန့်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်တောင်သူလယ်သမားများ၏အလုပ်ရှင်များကိုသူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်။ သူတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်သီးနှံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြီးထွားမှုတို့ကိုခြေရာခံရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်တည်ရှိမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုနေရသည့်သတ္တုနှင့်သတ္တုဓာတ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်တစ်မိနစ်ခေတ္တရပ်တန့်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတွင်စက်ရုံအခြေပြုပိုင်ဆိုင်မှုများမှမထုတ်လုပ်ထားသည့်သင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြည့်ရှုရန်အနီးကပ်ကြည့်ပါ။ သင်ယခုလမ်းလျှောက်နေသည့်ဘိလပ်မြေမှသင်ယခုဖတ်နေသောမျက်နှာပြင်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုပုံစံသည်မျက်မှောက်ခေတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးအလေ့အထများ၏ရလဒ်အပေါ်မှီခိုနေသည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်အလုပ်ထက်မဆိုလူများစွာကိုသတ်ဖြတ်ပြီးထိခိုက်စေသည်။ နှစ်စဉ် 15,000 မိုင်းလုပ်သားများသည်နှစ်စဉ်သေဆုံးကြပြီး၎င်းသည်တရားဝင်သေဆုံးမှုအရေအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းထက်ပိုသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်မည်သည့်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်မဖြစ်ရှိမရှိသိရန်မြေပြင်ပေါ်ရှိလူများအားကြီးကြပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမှောင်မိုက်သောနေရာများတွင်မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးနိုင်သောဤအထူးခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများသည်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အကယ်၍ မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုခုကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပါကမိုင်းလုပ်သားများသည်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သို့စေလွှတ်ရန်စောင့်ကြည့်သူများ၏ကလေးများအားအကြောင်းကြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မိုင်းလုပ်သားများအသက်ရှူကျပ်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခြင်း၊ အထူးခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများတွင်မီးခိုးရှာဖွေစက်များပါရှိပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုသတိပေးသည့်အနေဖြင့်မိုင်းလုပ်သားများအားအချိန်မီသက်သာစေသည်။
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေဟာသတ္တုတွင်းတူးသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေရဲ့မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားပြုလုပ်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်စဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်ကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကပြissueနာမှာလူများသည်သူတို့၏ဆောက်လုပ်သူများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမကျေနပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအလုပ်ကိုလုပ်မယ့်အစားအချိန်ဖြုန်းတာပိုကုန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများကိုဆောက်လုပ်သူ၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကသူတို့ကိုတည်ဆောက်သူများအားမျက်စိကျစေနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလူနေမြို့ကြီးတစ်မြို့၏နှစ်ထပ်တိုင်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး သည်သူတို့၏တည်ဆောက်သူများ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုဤ gadget ကို အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
၀ န်ထမ်းများပေါ်တွင်ဤစက်များတပ်ဆင်ခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကန်ထရိုက်တာသည်၎င်းတို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေသည်ကိုသိသောကြောင့်အလုပ်များခြင်းအားဖြင့်အလုပ်များစေလိမ့်မည်။ အခြေခံအားဖြင့်လူ့သဘောသဘာဝအရကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်ဖြစ်သည့်အခါသင်အလုပ်ပြုတ်မည့်အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါလူ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လာသည်။ 100% ရလဒ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားအဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရပါကအခြားအဆုံး၌တစ်ယောက်ယောက်အားကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သူအားသင့်တော်သောပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီနှင့်ဆေးဝါးများကိုပေးအပ်နိုင်သည်။ အဖြစ်အပျက်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကပြောနိုင်သည်မှာ Body-Worn Camera များသည်သင့်အားလုံခြုံရေးအစီအမံများသာမကစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များပါပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်နှင့်ယခင်ကင်မရာများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်မှာထင်ရှားပါသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုသေချာမသိသေးပါ သို့သော်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းမြင့်တက်စီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်ဖန်တီးနှစ် ဦး စလုံး၏တိုးတက်မှုအတွက်သော့ချက်အရေးပါမှုသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်ပြissuesနာအားလုံးအတွက်အဖြေမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်။ ဆန်းသစ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလုပ်အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာဖန်တီးပေးသည်။ ဤအလုပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်လူတို့နှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ထိုလူများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
မင်းကအထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတစ်ရုံကိုစိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ အလုပ်သမားတွေကသူတို့အလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသိတာလဲ၊ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကကင်မရာတွေကိုသူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ထားသင့်တယ်။ ဒါကသင့်ရဲ့အထွက်နှုန်းနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုကောင်းအောင်ကူညီလိမ့်မည်။
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုခြင်း၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ ၀ န်ထမ်းများအကြားကောင်းမွန်သောကျန်းမာသည့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်၊ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်မှာလူအများစုအတွက်ဘုံအရာဖြစ်သည့်သေးငယ်သောအရာများ (တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မတိုက်ခိုက်ကြဘူး)၊ လေ့လာမှုတစ်ခုအရခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသည့်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်များတွင်၎င်းတို့တပ်ဆင်မထားသည့်နေရာများထက်တိုက်ခိုက်မှုနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏အလုပ်သမားတိုင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသည့်အချိန်သည်ဤမျှလောက်ဝေးဝေးမဝေးပါ။
ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသို့မဟုတ်အခြားကင်မရာများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်သို့ရောက်သောအခါလုံခြုံစိတ်ချရသောအဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်လမ်းများပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လည်ပတ်နေလျှင်သင်ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရမည်။ သင့် ၀ န်ထမ်း၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်သူတို့ကားမောင်းနေပုံနှင့်လမ်းပေါ်တွင်သူတို့၏သဘောထားမည်သို့ရှိကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများတပ်ဆင်ပါ။ သင်၏အဖိုးတန်ဖောက်သည်များဖြစ်သောခရီးသည်များကိုသူတို့မည်သို့ဆက်ဆံသနည်း။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်၌အသုံးပြုပါကကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်စုံဖြင့်အသုံးပြုထားသော Cams သည်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာပထမ ဦး စွာယာဉ်မောင်းသူခြေရာခံရာလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံနိုင်ပြီး GPS ဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ဤနည်းဖြင့်သင်သည်တိုက်ရိုက်အစာရရှိသည်။ ဒီ cams ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကတော့၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ခဲ့လျှင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကိုသူတို့အသက်ကယ်ရန်အချိန်မီပို့နိုင်သည်။ သင်မှားယွင်းသွားသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်နောက်ပိုင်းတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ကားမောင်းသူသို့မဟုတ်စပယ်ယာ၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်ပါတီများ၊ ခရီးသည်များနှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ခရီးသည်တစ် ဦး ကအခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကအစာကြည့်နေသည်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးသူသည်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းသိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စပယ်ယာသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားမောင်းသူအပေါ်အပြုသဘောဆောင်စေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာခရီးသည်များသည်အလုပ်ရှင်များမှသတိပြုမိသောကြောင့်ယင်းယာဉ်မောင်းများသည်မတော်မတရားပြုခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းသိပြီးလုံခြုံစွာခံစားရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ခရီးသည်များနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ထမ်းများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးများ -
ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်သတ်မှတ်ထားသောနယ်ပယ်အချို့ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နေပါကဖောက်သည်အထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်များရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်လူများလာကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်ခန္တာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာကိုသင်အဲဒီမှာပေးထားတဲ့ support agent ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတပ်ထားတာကပိုကောင်းတယ်။ ထိုအေးဂျင့်၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကိုဤကိစ္စတွင်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏အပြုအမူကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ကိုသိသောကြောင့်သူသည်သူ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်အတွင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ -
မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမည်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မဆိုလုပ်ကိုင်သည်၊ ဖောက်သည်အထောက်အပံ့နှင့်စောင့်ရှောက်မှုသည်ထိုစီးပွားရေး၏အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောအထောက်အပံ့ကိုယ်စားလှယ်အကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအမှန်တကယ်သူတို့လိုအပ်သည့်အရာများကိုဝယ်ယူသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်များရရှိရန်သေချာစေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဖောက်သည်အားလုံးသည်သင့်လျော်သောအထောက်အပံ့နှင့်ဂရုစိုက်မှုရရှိကြောင်းသင်၏မျက်လုံးဖြင့်မြင်ခြင်းကပိုကောင်းသည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကိုရှာဖွေရန်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လျှပ်စစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါကခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးသောကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာအစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ က စစ်တမ်း 2012 တွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 33% ကသာမန်အားဖြင့်မကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းပြီးနောက်ကုမ္ပဏီများသို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားမည်ဟုပြောကြသည်။ နောက်တစ်ခု ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုညံ့ဖျင်းသောကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ 62 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဒုတိယတစ်ခုကလူ၏ဘ ၀ လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည် (ပွင့်လင်းသောဝါယာကြိုးကွန်ယက်တည်ထောင်ထားသောနိုင်ငံများတွင်) ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးသူများကဲ့သို့ပင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကိုယ်ခန္ဓာမှယိုယွင်းနေသော Cams များကိုလည်းအကျိုးရှိစေသည်။
မိလ္လာစက်ရုံများချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန်မြေပေါ်သို့ဆင်းသွားသောသူများသည်လေးနက်သောအခြေအနေများတွင်မကြာခဏဖမ်းဆီးရမိခြင်းခံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသည်သေခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤ ၀ န်ထမ်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားပါကထိုကဲ့သို့သောမတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတစ် ဦး သည်လူများစွာကိုကယ်တင်ရန်အချိန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကိုအချိန်ပေးနိုင်သည်။
Safai Karmachari Andolan (SKA) မှကောက်ယူခဲ့သောစစ်တမ်းသည်အတိတ်ကာလကလူမဆန်သည့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအဖြစ်သာမက 1327 ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းမှရရှိသောအချက်အလက်များအရတမီလ်နာဒူးသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း 250 လက်စွဲစာအုပ်များဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသေဆုံးမှုမှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယင်းအနက်မှသုံးပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ် 84 သေဆုံးမှုများသည်ချန်နိုင်းနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာများနှင့်လက်ကားရောင်းဝယ်မှု -
လက်ကားရောင်းဝယ်မှုဆိုသည်မှာကုန်ပစ္စည်းများအမြောက်အမြားကိုဝယ်ယူပြီးနေရာ ချ၍ ရောင်းချခြင်းကိုအစုငွေများ၊ ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသို့မဟုတ်စုရုံးမှုများအတွက်သိုလှောင်ထားသည့်ငွေလဲလှယ်ခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကုန်သည်များအကြားယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေရန်ထိုအရောင်းအ ၀ ယ်မျိုးကိုစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အစည်းအဝေးများအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောအနာဂတ်အသစ်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
ကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှု -
လက်လီရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာကုန်ပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲသူများဖြစ်သောနိဂုံးချုပ်သောဖောက်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးဆင်းမှုကိုချောမွေ့စေရန်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လိုအပ်သည်။
မင်းဟာကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝဆုပ်ကိုင်ထားပြီးဖောက်သည်များအပေါ်ထားရှိသောသူတို့၏သဘောထားသည်ကျွမ်းကျင်သည်။ ဤနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာများ၊ ဘဏ္financeာရေး၊ အာမခံနှင့်အိမ်ခြံမြေ:
ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများသည်ဘဏ္financeာရေး၊ အာမခံနှင့်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောနှုတ်ဖြင့်သဘောတူညီချက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းများကိုခြေရာခံရန်ဤ cams သည်ကြီးစွာသောအထောက်အကူဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အာမခံကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင်၏လုပ်ငန်းကိုရှေ့တန်းတင်နိုင်သောကင်မရာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဤကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်များ၏စိတ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အပြုသဘောနှင့်စစ်မှန်သောပုံရိပ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမည့်အရာအားလုံးကိုခြေရာခံကြောင်းသိလိမ့်မည်။
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှိပါကခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများသည်သင်၏ရောင်းဝယ်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးမှမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးမှမဆိုသဘောတူညီမှုတစ်ခုမှရပ်ဆိုင်းရန်ကြိုးစားပါကသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ဒါဟာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းဒေသခံအရာရှိများ၏ညွှန်ကြားချက်မှတဖြည်းဖြည်းစီမံခန့်ခွဲခဲ့မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည် နေထိုင်သူများသည်မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းကိုသိသောအခါသူတို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဥပဒေလိုအပ်ချက်များကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသည်အရေးကြီးသောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရန်အစားအဆင့်နိမ့်အတွေ့အကြုံများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကျနော်တို့ကတခြားကင်မရာများအပြုအမူကိုပြောင်းလဲကြဘူးကြောင်းကိုငါသိ၏။ ပြည်သူ့ပိတ်ထား-circuit ကိုတီဗီကင်မရာများအထူးသဖြင့်ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင်ထဲမှာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအလယ်အလတ်ကျဆင်းခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပုံရသည်။ traffic ကင်မရာများသိသိသာသာအရှိန်နှင့်မတော်တဆမှုလျော့ကျသွားသည်။
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန်နှင့်တာ ၀ န်ယူမှုကိုရရှိစေပြီး၊ ကွန်ယက်အမြောက်အများတွင်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ဥပဒေအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်မသေစေနိုင်သောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကဤယုံကြည်မှုမရှိခြင်းသည်အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ဤတရားဝင်ကွန်ယက်အသင်းအဖွဲ့များအတွင်းဖမ်းမိသောဗွီဒီယိုဖိုင်သည်တာဝန်ရှိသူများနှင့်ကွန်ယက်တွင်နေထိုင်သူများမှရှင်းပြခဲ့သောအခါသမယများနှင့်မှတ်တမ်းများအားပိုမိုခိုင်မာစေရန်အထောက်အကူပြုရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
ခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းလေ့ကျင့်ရေးကတဆင့်ဝါဒတိုးဖို့အလားအလာအခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသင်တန်းဆရာနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွေ့ဆုံနီးစပ်သူတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးရန်ရိုက်ကူးသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ cams နေဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိအရာရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအရာရှိများနှင့်တပ်သားသစ်အကြားကြိုတင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ကူညီပေးသည်။ သူတို့ကလူထုအတွက်မှားယွင်းတဲ့သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်သောအဘယျသို့အမှုအရာနှင့်ကရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုသိကြလိမ့်မယ်။
အထက်ပါအင်္ဂါရပ်များအားလုံးသည်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအသုံးချမှုများအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများအသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုမီးမောင်းထိုးပြသသောကြောင့်ကင်မရာများကို 'မှော်ကျည်ဆန်' အဖြစ်မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ခေတ်မီရဲတပ်ဖွဲ့ဘောင်တစ်ခုတွင်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောကဏ္ aspect တိုင်းကိုနိဂုံးချုပ်ရန်၊ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်မျက်မှောက်ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများကိုအဓိကအသုံးပြုမှုကိုရဲနှင့်စစ်တပ်ဌာနများတွင်တွေ့မြင်ရသော်လည်းဤဆောင်းပါးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆအားလုံးကိုရှင်းလင်းထားသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင်ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအထူးအလေးပေးနေစဉ်တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏ရှုထောင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ နည်းပညာအသစ်များနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်ထွက်လာခြင်းကလူတို့၏ privacy ကိုစဉ်းစားပုံကိုပြောင်းလဲသွားသည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော်ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများမှပြုလုပ်သောအသံဖမ်းခြင်းသည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းသည်အရာရှိများအားအထိခိုက်မခံသည့်အခြေအနေများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သာမကသုတေသနကိုဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အိမ်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့သောဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည်၎င်းတို့သည်တရားဝင်အိမ်ပိုင်ခွင့်ရှိသရွေ့ပုဂ္ဂလိကအိမ်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ရဲများအတွက်မကောင်းသောလူအများ၏လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ လူတစ် ဦး ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုမည်သည့်အပေးအယူမျှမပြုရပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းများကခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ဆင်ထားသောကင်မရာများ၏အသုံးဝင်မှု နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: ဒီဇင်ဘာလတွင် 5th, 2019 by admin ရဲ့
2437 စုစုပေါင်း Views စာ 17 Views စာယနေ့တွင်
၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန် Body ကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်း။